Iine Tourism Kudzoreredza Africa, iyo Saudi Arabia Yekushanya Shanduko iri kuenderera
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » African Tourism Bhodhi » Iine Tourism Kudzoreredza Africa, iyo Saudi Arabia Yekushanya Shanduko iri kuenderera
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Investments • Jamaica Kupwanya Nhau • Kenya Kupwanya Nhau • nhau • chengetedzo • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Apo Gurukota reSaudi rezveKushanya HE Ahmed Al-Khateeb, akaonekwa muJamaica akapfeka ngowani yaBob Marley, shanduko yeKufamba neKushanya yakanga ichangotanga.
World Tourism inoda rubatsiro uye Saudi Arabia iriko zvakare irikutamba chinoshaikwa cheiyo United States Yekushanya, mukusimudzira mureza weSaudi kumusoro uye mukurumbira.
Saudi Arabia iri munzira to kutamisa UNWTO kubva kuMadrid kuenda kuRiyadh kuve unoitisa dzimbahwe idzva reWorld Tourism Organisation (UNWTO), asi yatove mushanyi weiyo World Kufamba uye Tourism Council (WTTC) hofisi yedunhu uye zvimwe zvinoitwa zvepasirese.
Kenya yakoka nhumwa kumusangano uri kuuya weAfrican Tourism Kudzoresa neChishanu kuEast Africa Nyika iyi. Vazhinji venhume havagoni kumirira kusangana negurukota rezvekushanya muSaudi Arabia, Ahmed Al Khateeb, uyo angangodaro ari nyeredzi inonyanya kupenya pachiitiko ichi.
Secretary of Tourism weKenya, Najib Balala, zvakare mutungamiri wepasirese anga achitora chikamu muzvirongwa zvakawanda zvepasirese, kusanganisira iyo eTurboNews-batsigirwa World Tourism Network uye African Tourism Bhodhi. Pamwe chete negurukota rezvekushanya muJamaica, Hon. Edmund Bartlett, Balala akaitwa a Tourism Gamba neWTN gore rapfuura.
Gurukota rezvekushanya kuJamaica, Bartlett achangosvika muKenya uye achange achitaura kumusangano uyu seanoremekedzwa mutungamiri wepasi rose wezvekushingirira nekusimudzira. Achave achipa hurukuro yake inokosha kumusangano wemuAfrica.
Ari kuKenya, Gurukota reJamaica richasaina MOU ne satellite Global Tourism Resilience & Crisis Management Center (GTRCMC) kuKenyatta University mushure mekushanya neChina.
Mutungamiriri weKenya Kenyatta anoshanda seHonorary Co-chair (anomiririra Africa) weGTRCMC pamwe nemutungamiri weJamaica Andrew Holness naMarie-Louise Coleiro Preca, aimbova Mutungamiriri weMalta.
Zvakakosha pakushanya kwaBartlett kuKenya zvirokwazvo kungave kuri kuenderera mberi kwehurukuro dzekudyara pamwe negurukota rezvekushanya kuSaudi Arabia, Ahmed Al-Khateeb, iyo yakatanga zviri pamutemo muna Chikumi apo musangano wekutanga weJamaica-Saudi Arabia wakanangana nekudyara kwemukati kukurudzira. kukura kwehupfumi uye kuumbwa kwemabasa emuno emuno munyika yake yeCaribbean.
Apo Bartlett naAl Khateeb vakaonekwa sechikwata chevashanduri, zvaive pachena kuti Saudi Arabia yachinja uye iri kuramba ichichinja nekukurumidza - nemabhirioni achitsigira iyi shanduko.
Panguva iyoyo, Gurukota Al Khateeb vakatungamira nhume dzepamusoro-soro panguva yekushanya kwavo kuJamaica, kusanganisira vaipinda, Abdurahman Bakir, Mutevedzeri weMutungamiri weInvestment Attraction uye Budiriro mubazi reInvestment muSaudi Arabia, uye Hammad Al-Balawi, General Maneja weInvestment Management uye Oversight muSaudi Ministry of Tourism.
Balala, Bartlett, uye Al Khateeb vanogona kunge vari mubatanidzwa wekukunda nevatungamiriri vemuno vane nzira yepasirese yekuunza tariro kuAfrica inokuvadza indasitiri yekufambisa neyekushanya.
Cuthbert Ncube, Sachigaro we African Tourism Bhodhi, uye anofambisa basa reProjekti Tariro achitungamirwa neaimbove Secretary-General weUNWTO Dr. Taleb Rifai, akati: “African Tourism Board yakamira mira uye yakagadzirira kubatsira nekugadzirisa chero danho rinogona kubuda munhaurwa yakakosha iri kuuya pa African Tourism kudzoreredza. Kugadzikana hakuna kukosha chete mukumutsiridza indasitiri inodiwa zvakanyanya yekufambisa neyekushanya kukondinendi yedu, asiwo kugadzikana uye chengetedzo kune dzakawanda dzenyika dzedu. "
Gurukota reSaudi Arabia Al Khateeb, anova Sachigaro wemasimba ane mabhiriyoni emadhora emadhora emadhora emadhora emadhora ekuSaudi Fund Yebudiriro, akataura chiono chekukonzeresa kuwedzera kwebhizinesi reSaudi Arabia munyika.
Musangano weKutora Kwekushanya wakaitirwa muRiyadh, Saudia Arabia, muna Chivabvu wegore rino. Yakatarisa panguva nyowani chikamu chekushanya chaipinda uye chakaongorora nzira dzekuvakisa zvekare chikamu chemuAfrica chekushanya chakakanganiswa nenjodzi yeCOVID-19.
Musangano weKenya unotarisirwa kuongorora mukana wehukama hwakasimba pakati penyika dzemuAfrica neKingdom yeSaudi Arabia, uye kudzikisira zvakakonzera denda iri nekusimudzira kusimba.